Marketing amin'ny valala | Martech Zone
Talata, May 12, 2009 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Fanavaozana: ny ny valiny dia ao amin'ity fanentanana ity! 4,911% nitombo ny fifamoivoizana nanomboka ny volana aprily ka hatramin'ny mey; Fijery horonantsary 144,843 misy hevitra 162; Bitsika 1,500 120; Lahatsoratra bilaogy 7 ao anatin'ny iray volana; Bitsika avy amin'i Guy Kawasaki, Kevin Rose, ary Jason Calacanis; TV nasionaly XNUMX no miresaka.
Nody tany an-trano aho androany alina ary nahazo FedEx niresaka tamin'ny bilaogiko valala. Nahagaga fa nosokafako ilay fonosana ary nahita fonosana valala voafidy sôkôla tena izy - fampielezan-kevitra ara-barotra izao!
Vakio ny pirinty tsara! Manondro hafatra avy ao amin'ilay fonosana Valala ho an'ny mpandraharaha:
Mety tsy ho araka ny eritreritrao ny valala! Izy io dia rafitra finday virtoaly mitambatra (pbx virtoaly) ho an'ny orinasanao izay misy isa tsy andoavam-bola, fahaiza-mandroso mankany an-trano, finday, birao… ary na dia mailaka an-tserasera mankany amin'ny fahafaha-mailaka aza. Ny vidiny dia miankina amin'ny fonosana tianao - fa manomboka amin'ny $ 9.95 isam-bolana izy ireo ary hatramin'ny $ 199 isam-bolana.
Izaho dia mpampinono amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing izay mivoaka avy amin'ny vahoaka ary ity dia iray amin'izy ireo! Te hianatra bebe kokoa momba ny fomba namaritan'ny Grasshopper fa mpivarotra no tena lasibatra amin'ity fampielezan-kevitra ity ny mpandraharaha. Manantena ihany koa aho ny hahita ny fomba fiasan'ny fampielezan-kevitra. Raha tsy miteraka fidiram-bola mivantana izany dia azo antoka fa hitondra fahatsiarovan-tena amin'ny Grasshopper!
Mahaliana ny mahita ny fomba hifaninananan'ny serivisy sy haharetany Google Voice rehefa mandeha mivantana. Toa manana fiasa matanjaka i Grasshopper, saingy ny sakany amin'ny vidiny sy minitra dia mety hanery ny orinasa kely sasany.
Mikasika ireo valala sôkôla rakotra, nanandrana iray aho ary toy izany koa ny naman'ny fianakaviana. Toy ny sôkôla ny tsirony… nisy crunch kely ihany. Nandà ny hanandrana iray ny zanako lahy sy vavy.
Tags: mailakaInstantCustomerjabberJiraJotFormKanbanToolKickoff LabsLeanKitLeftronicLessAccountingLighthouseMpandamina ranokaLockitronmailbox
Marketing amin'ny fitarihana amin'ny Powerpoint?
May 13, 2009 amin'ny 10: 26 AM
Misaotra tamin'ny fanoratana mahafinaritra. Faly ianao nahazo ny valala ary manantena ianao fa nanandrana iray.
Zavatra roa no resahinao no tiako hasongadina. Voalohany, momba ny fandehanana mivantana. Mpandraharaha maherin'ny 70,000 izahay no nanompo hatramin'izao (http://grasshopper.com/about) ary manohy manatsara ny serivisy mifototra amin'ny fanehoan-kevitra. Faharoa, momba ny Google Voice. Amin'ny maha serivisy mpanjifa azy dia tsara ny Google Voice. Ny maha-samihafa ny Grasshopper dia natao ho fitaovana fandraharahana. Fanitarana ho an'ny mpiasa sy sampana, fandaharam-potoana fandefasana antso, vavahadin-tserasera matanjaka, azo itokisana ary fanohanana mivantana 24/7. Raha ny tena izy, ny fanitarana Grasshopper-nao dia afaka mandefa any amin'ny laharan-telefaona Google Voice araka izay azony atao amin'ny Blackberry, telefaona an-trano, sns.
Raha te hanandrana ny serivisy ianao dia ampahafantaro ahy azafady.
May 13, 2009 ao amin'ny 9: 54 PM
Misaotra betsaka namaly! Fantatro tanteraka fa misy fahasamihafana goavana eo amin'ny fampiharana ara-barotra sy ny mpanjifa – raisina tsara ny hevitrao. Arahabaina noho ny fitomboanao sy ny fahombiazanao. Tsy azoko antoka fa hanome saina tsara ny fampiharana anao aho… fa rehefa niasa tamin'ny fanombohana maromaro aho dia hanana Grasshopper ao amin'ny lisitry ny rindranasa hanandramako.
Mamerina ny fisaorana anao!